Manazava ny fomba hanakana ny Pop-Up ao amin'ny Windows ny Semalt
Hatramin'ny 2017, rariny ny milaza fa efa nahavita ny fiainantsika nandritra ny fotoana ela ny teknolojia. Ny aterineto dia mampifandray ireo fitaovana maro isan-tsegondra, ary ny habetsaky ny fampahalalana izay mandalo amin'izany dia tena goavana. Araka ny voalazan'i Lisa Mitchell, Semalt Mpitarika Success Successor, ity dia niteraka safidy maro sy tombontsoa maro, saingy misy ihany koa ny olana vitsivitsy, ny iray amin'izy ireo dia mahasosotra matetika ny mpampiasa: miompana amin'ny dokambarotra pop-up !
Raha toa ka mihazakazaka Windows eo amin'ny PC ianao, dia tsy isalasalana fa nahitana ity olana ity teo amin'ny fiainanao. Rehefa vita ny fametrahana rafitra iray dia mihazakazaka tsara ny zava-drehetra, ary tsy misy olana amin'ny pop-ups, izay manomboka miseho aorian'ny fampiasana vitsivitsy. Aorian'io fotoana io, ny olana dia manjary mijaly mafy hatrany, na dia tsy misy na dia iray amin'ireo dokambarotra ireo aza ny mifandray amin'i Windows. Amin'ity lahatsoratra ity dia tianay ny manolotra fomba vitsivitsy hamahana ny iray amin'ireo olana goavana indrindra amin'ny tranonkala: Ahoana no hanakanana ny dokambarotry pop-ups
Alohan'ny hanombohana ny fanadiovana, te haka fotoana kely hanazavana ny toerana misy ireo pop-ups. Satria tsy avy any Windows izy ireo dia mipetraka ao amin'ny tranonkala izay mametraka malware, adware na PUPs (Potentially Unwanted Programs). Ny fandaharan'asa maro dia mora amin'ny famokarana pop-ups azy manokana, izay anisan'ny ampahany amin'ny olana. Na inona na inona niaviany, ny fanakanana pop-ups dia dingana roa dingana: voalohany, diovy ny solosaina misy malware na adware, ary ampiasao ny fanitarana tranokala mba hanakanana pop-ups amin'ny lalany.
Ireto misy vitsivitsy izay azonao atao:
1..Arovy ny rafitra fanalahidy. Amin'ny ankapobeny, tsy ampy ny fanaovana fepetra fanaraha-maso virtoaly toy ny AVG. Mila fikarakarana manokana sy matihanina ianao, toy ny Malwarebytes Anti-Malware, sehatry ny rindrambaiko natao manokana mba hialana amin'ny malware rehetra hita ao amin'ny ordinateranao. Azonao atao koa ny mampiasa programa toy ny AdwCleaner mba hanesorana Adware. Ireo fandaharan'asa ireo dia samy afaka ampiasaina sy tena ilaina, mba hahatsiaro fotsiny raha mampiasa azy ireo, satria tsy te hamafa zava-dehibe amin'ny aloka ianao na amin'ny tsy fisian'ny famerana.
2. Ampidiro ny tranokala fanampiny. Ny ankamaroan'ny tafika fanampiny dia miasa amin'ny Google Chrome, Firefox, Edge, Opera na Safari. Ireo tafika fanampiny dia manavaka amin'ny famakafakana ny fifamoivoizana sy ny fanakanana ny pop-ups rehetra hitany. Ny tranokala dia azo jerena ao amin'ny menu "Content" amin'ny safidin'ny tranonkala, ary mampahatsiaro zavatra mifanaraka amin'ny andalana "Aza avela hijery tranonkala ny pop-ups" - ity ohatra ity dia avy amin'i Chrome. Na dia tonga amin'ny blocs pop-up aza ny navigateur, dia manolo-kevitra ny fametrahana iray hafa tahaka ny Ghostery, uBlock Origin na AdBlock plus.
3. Atsaharo ny dokam-barotra fox sy Windows. Misy tranonkala ara-dalàna izay te hampiasa pop-ups, toa an'i Ask, Microsoft Bing na Google. Ireo matetika dia hametraka ny PUPs ho tsy voafetra raha toa ka misafidy ny dikan-teny maimaimpoana amin'ny fametrahana ny iray amin'ireo vokatrao. Na tsindrinao izay zavatra notadiavinao na tsy voamarikao nandritra ny dingana fametrahana, na ampiasao fandaharana malaza antsoina hoe Unchecky, izay afaka manao izany ho anao na dia aorian'ny fametrahana ilay rindrambaiko aza.
Ankoatra izany, ny Windows 10 dia efa misy ihany koa pop-ups amin'izao fotoana izao. Tsy manahirana toy ny hafa, mazava ho azy, fa manome "fampiharana soso-kevitra" ao amin'ny sakafo fanombohana. Mba hanesorana ireo, tsindrio havanana amin'ny kofehy ary fidio ny "fanesorana ny soso-kevitra rehetra."
Manantena izahay fa ny tari-dàlana momba ny fomba fialana an-tsokosoko dia hanatsara ny fitadiavanao sy ny traikefa amin'ny surf-nao. Ny pop-ups dia iray amin'ireo olana manahirana indrindra hiatrehana amin'izao fotoana izao, ary tsy tokony hisy olona hijaly mihoatra noho izay ilaina Source .